Fifaninanana – Fadintseranana : hiantohana ny fitovian’ny mpiadina rehetra | NewsMada
Fifaninanana – Fadintseranana : hiantohana ny fitovian’ny mpiadina rehetra
Nanapa-kevitra ny minisiteran’ny Vola sy ny tetibola sy ny Foibem-pitantanana ny Fadintseranana malagasy, miaraka amin’ny minisiteran’ny Asam-panjakana ary ny Bianco fa nofoanana ny « test de présélection » tamin’ny fifaninanana hidirana ho mpiasan’ny fadintseranana (agents de constatation, agents d’encadrement, contrôleurs sy élèves inspecteurs) ny 29 jolay lasa teo. Ny antony, noho ny olana ara-teknika voamarika tamin’io fotoana io, ka nampikorontana ny fizotran’ny adina tamina toerana maro.
Koa tapaka fa haverina ny 22 aogositra ho avy izao ny « test de présélection », hiantohana ny fitovian’ny mpiadina rehetra manoloana ny fiatrehana ny fifaninanana. Hisy ny fampilazana havoaka momba ny andinidinin’ny fiatrehana an’izany, haparitaka amin’ny fampahalalam-baovao isan-karazany manerana ny Nosy. Noraisin’ny minisitera mpiahy izao fanapahan-kevitra hisorohana ny ahiahy rehetra mikasika ity fifaninanana fidirana ho mpiasan’ny fadintseranana ity. Be loatra ny resaka mandeha mandoto ny fanjakana momba izany, tsy manome toky intsony ireo mpiadina.
Tsy amin’ny fifaninanana fidirana ho mpiasan’ny fadintseranana ihany no mampalaza ratsy ny fanjakana amin’ny fihanaky ny kolikoly. Ho an’ny maro, karazana fomba fotsiny sisa ny fanaovana fifaninanana. Koa nanamafy ny minisitry ny Vola sy ny tetibola, Rakotoarimanana Gervais, ny amin’ny fiantohana ny fahadiovan’izany fifaninanana izany. Antenaina tsy hiverina fanindroany ny lesoka toa ireny.